စေ့စေ့တွေး…မြင်အောင်ကြည့်…ဦးနှောက်သုံး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Marketing » စေ့စေ့တွေး…မြင်အောင်ကြည့်…ဦးနှောက်သုံး…
Posted by johnnydeer on Feb 6, 2014 in Marketing | 16 comments
စိမ်းမြမြ လယ်ကွင်းပြင်ကြီးကို ကြည့်ချင်လို့….
လယ်ကွင်းအလယ်က လယ်စောင့်တဲလေးမှာ အိပ်ရင်း အေးချမ်းဆိပ်ငြိမ်မှုအရသာကို ခံစားချင်လို့….
လယ်ကွင်းထဲ ဖြတ်တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေနုအေး နွဲ့နွဲ့နော့နော့လေးကို တ၀ကြီး ရှုရှိုက်ချင်လို့…
တော့ဓလေ့ တောအစာလေးတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ချင်လို့…
တော့ဓလေ့ လယ်ကန်သင်းရိုးတလျှောက် ပုဇွန်လုံးနှိုက် ဖားရိုက် ငါးရှာ ပျော်စရာ ဗဟုသုတလေးတွေရချင်လို့…
တဂျောင်းဂျောင်းနဲ့ ဟိုယိမ်း ဒီယိမ်း လှည်းကြမ်းလေး စီးချင်လို့…
တောသဘာဝ တောအလှု တောဓလေ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ စီးမျောခံစားချင်လို့….
ဒီလို အချက်တွေကြောင့် တောကို အလည်သွားကြတာပါ….
ဒါကို တောကလူတွေက မြို့သားတွေ လာလည်တာပဲဆိုပြီး မရှိရှိတာ ရှာကြံပြီး ကိတ်မုန့် ခပ်ညံ့ညံ့တွေ မရမက ဇွတ်ဝယ်ကျွေး..ချိုရဲရဲ ရေခဲမုန့် တွေ ဇွတ်ကျွေး…ကားအစုတ်ကြီးတွေနဲ့လိုက်ပို့…ဒီလိုဧည့်ခံလို့ကတော့ မြိုကကလူကလဲ စိတ်ညစ်…တောကလူတွေအတွက်လဲ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်…ဘာတစ်ခုမှ အဆင်ပြေနိုင်စရာမရှိပါဘူး…
နိုင်ငံခြားက ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ မြန်မာပြည်လာလည်တယ် ဆိုတာ မြို့ကလူ တောလာလည်သလိုပါပဲ…ကိုယ့်သဘာဝ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု ကိုယ့်ဓလေ့ထုံးစံတွေကို အရှိအတိုင်းပဲ ပြရမှာပါ…သူတို့တွေ့ချင် လေ့လာချင်တာလဲ ဒီက သဘာဝတရားတွေကိုပါပဲ…
ဥပမာပေါ့ဗျာ….နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က မေမြို့လာလည်တယ် ဆိုပါစို့…သူတို့ ဘာတွေ စိတ်ဝင်စားလဲ…ကန်တော်ကြီးလား…ရေတံခွန်လား…
.မြန်မာတွေ မျက်စိမှာ ဘယ်လောက်လှလှ…သူတို့အတွက်တော့ လမ်းဘေးရှုခင်းသာသာပါပဲ…သူတို့ ဒီထက် အပုံတစ်ရာလှတဲ့ ပန်းခြံတွေ ရောက်ဖူးပြီးသားပါ…
လက်တောက်လောက် ရှိတဲ့ ရေတံခွန်လောက်ကတော့ သူတို့ စိတ်တောင် မ၀င်စားပါဘူး…သူတို့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ ရေတံခွန်တွေ ရောက်ခဲ့ဖူးပြီးသားပါ…
သူတို့က မေမြို့ဆိုတာ ကိုလိုနီခေတ်က တည်ခဲ့တဲ့ မြို့ဆိုတော့ သိပြီးသား….ကိုလိုနီအငွေ့အသက် ရှေးအိမ်တွေကို အဓိက စိတ်ဝင်စားတယ်…ကိုလိုနီခေတ် ရှေးဗိသုကာလက်ရာတွေကို လေ့လာချင်တယ်…နေထိုင်သွားခဲ့ကြတဲ့ ရှေးဘိုးဘွားဘီဘင် အဆက်အဆက်ကို စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းကြည့်ချင်တယ်…
ရှေးအိမ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်…တော်တော်များများကို အစိုးရရုံး…အိမ်အဖြစ် ပြောင်းလဲထားတယ်…နိုင်ငံခြားသားတွေက ၀င်လေ့လာချင်တယ်…၀င်လို့မရဘူး…နိုင်ငံခြားသားတွေခမျာ အပြင်ကနေ ဟိုချောင်း ဒီချောင်း သူခိုးလိုလို ကြမ်းပိုးလိုလို ဘ၀ Auto ရောက်ရပါလေရော…အမှန် ဖြစ်သင့်တာကတော့ ဒီလို အိမ်တွေကို ရှေးမူမပျက် ပြင်ဆင်…ရှေးဟောင်း ပရိဘောဂတွေ ဓာတ်ပုံတွေ ရှာထည့်…သမိုင်းကြောင်းတွေ ရေးထား…(ဥပမာပေါ့လေ…ဒီအိမ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က သစ်တောဝန်ထောက် မစ္စတာ ဘယ်သူနေသွားတဲ့အိမ်ပါ ဘာညာပေါ့) ၀င်ခွင့် ဒေါ်လာတွေကောက်…ခရီးသွားတွေဆို ဘယ်လောက် သဘောကျလိုက်ကြမလဲ…ဘယ်လောက်တောင် လာလိုက်ကြမလဲ ဆိုတာ…
မြို့ကလာတဲ့သူတွေကို Cream အညံ့ကြီးနဲ့ ကိတ်မုန့် ဇွတ်ကျွေးသလိုပါပဲ…ကျွေးတဲ့သူတော့ ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူး…စားတဲ့သူတော့ စိတ်ဓာတ်တွေ ကျလို့….
ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေး…ဘာညာသာရကာ ရွတ်နေကြပြီး တကယ်မြှင့်တင်ဖို့ဆိုတာ တာဝန်ရှိသူတွေ ဦးနှောက်သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ် ဆိုသည့်အကြောင်း အချက်တစ်ချက်ကိုပဲ ဥပမာ ယူ ရေးလိုက်ရပါတယ်….
ဟုတ်ပါ့ဗျာ.. အနော်လည်း ကန်တော်ကြီးထဲသွားလည်တုန်းကဆို အဲ့လိုခံစားချက်ကို ခံစားမိတယ်.. တကယ်တော့ ကန်တော်ကြီးက တကယ့်အသေးအမွှားလေးပါ.. ပန်းတွေကို ဆေးခြယ်ထားတာ.. ဘယ်လိုမှ ခံစားကြည့်လို့မရဘူး.. Tourism အကြောင်းများ ပြောရင် အားကြီးရယ်.. အားမှ အတင်းတုပ်ပါဦးမယ်..
အောင်မငီး …ဗမာပြည်မှာပဲရှာတွေ့နိုင်တဲ့ သစ်ပင်တွေ သစ်ခွတွေ ..အကောင်တွေ ..လိပ်ပြာတွေ… ၀ါးတွေ ကြည့်ခဲ့ဘူးရား သာမီးရယ် …ရင်ကျိုးရချည်ရဲ့ ….
ကြည့်ခဲ့ဘူး.. သများ လုပ်သက်နုနုလေးမှာ သွားခဲ့ရတဲ့ အပျော်ခရီးဆိုတော့ လူကြီးတွေ ခေါ်တဲ့နောက် လိုက်တာရယ်..ဒါ့ပုံတွေ အားကြီရိုက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ရတယ်.. နှမြောထှာ..
မြန်မာတွေ မျက်စိမှာ ဘယ်လောက်လှလှ…သူတို့အတွက်တော့ လမ်းဘေးရှုခင်းသာသာပါပဲ…အဲ့တာကတော့ နည်းနည်းကွဲလွဲတဲ့အမြင်ကဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဗျ ။အင်္ဂလန်က Kew botanical garden ကိုကော်ပီကူးထားတဲ့ မြန်မာမျိုးရင်းလေးရာလောက်ရှိတဲ့ Eco Tour သမားတွေ တကူးတက လေ့လာရတဲ့ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ပါဗျ ။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံခြားသားတွေက မလာခင်မှာ တိုးကုန်ပဏီနဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှ ခရီးစဉ်ဆွဲတတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျ ။ နိုင်ငံခြားသားအလာနည်းတဲ့ကိစ္စကတော့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်လို့ ရေးရတာပါ ဆိုလို့ ဒေသတွင်းက ဟိုတယ်တွေဈေးနဲ့ လေယဉ်လက်မှတ်ဈေးတွေကို ယှဉ်ကြည့်စေလိုပါတယ်ခင်ဗျ ။နောက်တခုကရန်ကုန်မှာ ပြင်ဦးလွင်သားတွေGM အဆင့်နဲ့ ဦးဆောင်နေတဲ့ ခီးသွားကုန်ပဏီတွေ ဆယ်ခုလောက်ရှိပါတယ်ဗျ ။ ကိုလိုနီခောတ်က အိမ်တွေကို ပြင်ဆင်ပြီး ပြသဖို့ကတော့ တူညီတဲ့ အကြံဥဏ်ပါခင်ဗျ ။ လေးစားပါတယ် ။
ခုမှပြန်တူးမိတယ်..ကျော်ဘာများမန့်မှားပါလိမ့်… အနီခြောက်ခုတောင် ….အဟိဟိဟိ
အနီတွေ့တိုင်း…အစိမ်း ၂ပြန်မြှောက်လို့.. မှတ်ကွယ်…။
တခါကများ..စိတ်ကူးပေါက်ပြီး.. အဲဒီအနီရောင်ကို.. png မှာအပြာလေးပြောင်းပေးလိုက်ဖူးတယ်..
ဖိုတိုရှော့မှာ.. One Click ပါပဲ.. လွယ်ထှာ…။
သဘောက.. အနီက… ကွန်ပြူတာရဲ့.. ၀က်ဘ်ကုဒ်မှာ.. #FF0000
ဘဘဂျီးတို့ က အဟောင်းဆိုရင်
အကွက်ဟောင်း တွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ အဟောင်းမှန်သမျှ ဘာမှ မထိမ်းသိန်းချင်ဘူး လူလေးးးရယ်
ယူအက်စ်..အယ်လ်အေကို.. မြန်မာပြည်ကအသိတွေလည်လည်လာတော့.. မြန်မာဆိုင်လေးခေါ်ပြီး.. မြန်မာထမင်းဟင်းလေး.. ၀ယ်ကျွေးမိပါတယ်..။
အေး.. မင်းတို့မြန်မာပြည်လာမှ.. ဟမ်ဘာဂါတွေ.. ပီဇာဆိုင်တွေလိုက်ပို့ကျွေးဦးမယ်တဲ့…
တာဝန် သိမှု တာဝန်ယူမှုနဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေလည်း
မြှင့်တင်ပါဦးမှ. . . .
ကိုယ်ရေးတဲ့ စာလေးတွေကို ၀ိုင်းကောမန့်ပေးတဲ့သူတွေကို ပြန်ပြောရအောင် ဆိုဒ်ဖွင့်မယ်လို့ ကြိုးစားတော့ ဆိုဒ်က မပွင့်…ပွင့်ပြန်တော့ Log In မ၀င်နဲ့….သြော်…MPT…MPT …နင့်ကိုလေ…ငါ တောက်တောက် စဉ်းပစ်ချင်တယ်…
ရှေးအိမ်တွေကို ခေတ်မှီအောင်မပြင်ဆင်ဘဲ ရှေးကအတိုင်းထား ပြီး ပြစေချင်ပါကြောင်း
မန်းလေးမြို့မှာလည်း ရှေး ကတည်း က အိမ်တွေ ရှီပါကြောင်း
အချိုဆိုခေတ်မှီအောင်ပြင်လိုက်တော့ ရ သ ပျောက်သွားပါကြောင်း
အကုန်လုံးက မှန်နေတော့ ဘာပြောရမှန်းကို မသိဘူး… တခုပဲပြောချင်တာ… တခါမှ ဒီလောက်နီတာ မမြင်ဖူးဘူး… ကြည့်မကောင်းလို့ လျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်ဗျား… တဂျီးတောင် ကျွန်တော်ကယ်လို့ ကာလာလွတ်တာ…
ပေးတဲ့သူက တောပုန်းကြီးဘဝကလာတာမို့ အကောင်းမြင်ဝါဒီမဟုတ်ဘူးလေ
အော်.. အော်… ဟုတ်…
ဒါကိုသေသေချာချာပြန်ဖက်မိတော့.. စာရေးသူဂျွန်က… တော်တော်အမျှော်အမြင်ရှိတာပဲလို့…
ရန်ကုန်က.. ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦတွေ စတစ်တကျထိမ်းသိမ်းတာက.. ပျူခေတ်ကမြို့ကိုပြန်ဖေါ်တာထက်ပိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့..